Iziqhingi zaseMarquesas, ipharadesi | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Izindawo zokuvakasha, Iziqondiso
Izintaba, uhlaza oluhlaza, ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka, amabhishi nelanga, isifinyezo esihle salokho i- Iziqhingi zaseMarquesas. Lesi siqhingi ingamakhilomitha ayi-1.500 XNUMX ukusuka eTahiti futhi liyipharadesi langempela.
Uma uthanda lolu hlobo lokwakheka komhlaba, isiko lasePacific, ukuzijabulisa okubukhoma futhi ujabulele imisebenzi yangaphandle, hamba lapho uGauguin noBrel bahamba khona noma bacwila ezweni elihle elingaphansi kwamanzi, lapho oya khona yiMarquesas, njengoba okwethu kunjalo nanamuhla. Nazo-ke!
Ziyiziqhingi ezingamakhilomitha ayi-1.500 ukusuka eTahiti futhi ziqukethe nxazonke iziqhingi eziyishumi nambili, kodwa kuhlala eziyisithupha kuphela. Namuhla banabantu abacishe babe ngu-9200 XNUMX abantu futhi isikhungo sayo sokuphatha yiNuku Hiva.
Lezi ziqhingi ziyinhlanganisela enhle yamabhishi esihlabathi esimnyama anezindawo zokuphupha. Ngabe imvula, banakho izigodi, banakho izimpophoma, ngakho-ke imisebenzi abayinikezayo miningi: ukugibela amahhashi, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba nge-4 × 4 jeep, ukudilika, ukukhwela ngesikebhe… Futhi njengoba sishilo ngenhla, abaculi uGauguin noBrel bahambahamba lapha ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX befuna ukuthula okuncane. Futhi bamthola unomphela ngoba ngisho nanka amangcwaba akhe, eCalvaire Cemetery.
Ngokungafani nezinye iziqhingi eFrench Polynesia, lapha awekho amachibi noma izixhobo zamakhorali ezivikela ugu. wakhe iziqhingi zezintaba-mlilo onqenqemeni olubukhali, lwezintaba ezibukhali ezaqhuma ekuqhumeni kwemagma, enamahlathi nezigodi ezijulile. Ingabe mayelana esinye seziqhingi ezikude kakhulu emhlabeni, kude kakhulu nanoma yisiphi isisindo sezwekazi, kangangoba zinendawo yazo yesikhathi.
Isiqhingi esikhulu kunazo zonke seqembu iNuku Hiva. Kuyaziwa nangokuthi i-Mystic Island futhi inamasayithi amaningi athakazelisayo: the Impophoma yeHakaui Valley, indawo yesithathu ephezulu emhlabeni, ibhishi elimnyama lase-Anaho, imigede engaphansi kwamanzi ezigcina izimbali nezilwane ezihlaba umxhwele kanye neCathedral of Notre Dame enokhuni namatshe aqoshiwe amele isiqhingi ngasinye. Lapha idolobha elikhulu ITaiohae, inhlokodolobha yezokuphatha yeziqhingi.
Indawo yayo ephakeme kakhulu yiNtaba iTekao, engamamitha ayi-1.185, futhi ayinazo izixhobo zamakhorali noma ugu oluyisicaba. Isiqhingi unamagugu amaningi omlando, Izindlu zamatshe ezinesitayela sasePolynesia, izinqaba namathempeli. I-France yawunamathisela ngo-1842. Ekuqaleni yayinikezelwe ukuhweba nge-sandalwood futhi yayiyindawo yama-whalers, ukuze kamuva izinikele kakhulu ekuthumeleni izithelo.
Lesi siqhingi sinogu olusentshonalanga olubi kakhulu, lunamachweba amancane avulekela ezigodini ezijulile. Azikho izigodi lapha. Kusogwini olusenyakatho lapho kunamachweba amabili abaluleke kakhulu, anezindawo ezijulile: U-Anaho noHatihe'u A'akapa. Ehlangothini lwaseningizimu kunamanye amatheku futhi lapha kunamachweba amaningi. Ngaphakathi kwezwe kukhona amadlelo aluhlaza lapho kufuywa khona izinkomo.
Njengoba sishilo ngaphambili, isikhungo sokuphatha yiTaioha'e, eningizimu. Wake wabona Owasinda, uchungechunge lwe-TV? Yebo, kuNuku Hiva isizini yesine yaqoshwa, ngo-2002.
Iziqhingi zaseMarquesas zihlukaniswe iziqhingi ezisenyakatho, zikhona eziyisishiyagalombili futhi phakathi kwazo kukhona iNuku Hiva; iziqhingi eziseningizimu, eziyisikhombisa, nezinye izindunduma ezingabi iziqhingana ezisenyakatho. Isiqhingi sesibili esibaluleke kunazo zonke iHiva Oa, futhi isiqhingi sesibili ngobukhulu seqembu futhi ngaphakathi kweziqhingi eziseningizimu.
Nansi itheku ledolobha lase Atuona futhi leli sayithi ngokuvamile liyichweba lokuqala elithumela imikhumbi liwela iPacific liye ngasentshonalanga. Singakusho lokho Kuyisiqhingi esinomlando omningi weqembu ngoba iqukethe izithombe ezindala kakhulu zamaTiki futhi bekuyindawo lapho umdwebi uPaul Gauguin nomculi uJacques Brel bashona khona. Kuyaziwa nangokuthi i- Ingadi yaseMarquesas ngoba luhlaza kakhulu futhi luvundile.
UHiva Ova unogu nge amabhishi namawa lapho kwenziwa khona ukuntywila, kepha kuseseyisiqhingi kwesinye isikhathi okubonakala ngasese, kuthule, kucishe kube sodwa. Idolobha elibaluleke kakhulu yi-Atuona, emaphethelweni aseningizimu yeTaaao Bay, evikelwe yizintaba ezimbili eziphakeme kakhulu esiqhingini, iMount Temetiu neMount Fe'ani.
Esinye isiqhingi sinjalo I-Ua Pou, isiqhingi sesithathu ngosayizi. Inkulu amakholomu we-basalt, umkhiqizo womsebenzi wentaba-mlilo, obhapathizwe ngegama lamaqhawe adumile, uPoumaka noPoutetaunui. Ngo-1888 yilezi zinsika ezagqugquzela uRobert Louis Stevenson ukuba athi ziyafana imengamo yentaba-mlilo ebheke phezulu emqansweni wesonto, njengoba bebuka itheku lomuzi waseHakahau, isiqhingi esibaluleke kunazo zonke.
I-Ua Huka inobuhle obumangalisayo, icishe ibe yintombi. Kukhona amahhashi asendle, umhlaba umbala wehlane, izimbuzi ... ITahuata ngokwengxenye yayo isiqhingi esincane kunazo zonke okuhlala kulo. Kepha yaziwa ngumhloli wamazwe odumile waseBrithani, uKaputeni Cook, owavakashela ngekhulu le-XNUMX. Itholakala kuphela ngamanzi avela kuHiva Ova ngakho-ke uhambo olunconyiwe. Izigodi zalo ezivundile zibuka amatheku ngamanzi acwebile, uhlala ngokuthula uthathe ekhaya amakha asendaweni, i- Umuthi wothando njengoba besho lapha, uwoyela wekhulu.
UFatu hiva inamawa aphakeme angena olwandle futhi anikeze imibono emangalisayo evela phezulu. Ngo-1937 umhloli wamazwe uThor Heyerdahl nomkakhe, bahlala isikhashana behlala lapha futhi bafingqa ulwazi lwabo encwadini. Kubonakala sengathi kusukela ngaleso sikhathi kuncane okushintshile. Iningi lezakhamizi zalo lihlala esigodini sase-Omoa nezindawo ezisizungezile, itheku. Indawo yaseHana Vave ivikelwe ngabadumile Itheku lezintombi, muhle lapho ubuka khona, ikakhulukazi lapho kushona ilanga ...
Uyazithanda lezi ziqhingi? Uma uzizwa uthanda ukuhlangana nabo mathupha bese unaka i- imininingwane esebenzayo engikushiya ngezansi, ngihlale ngazi ukuthi ziyiziqhingi ezingekho emzileni wakudala wabavakashi iFrench Polynesia: ISociety Islands, iBora Bora, iMoorea, iTuamotu Atolls kanye neLeeward Islands.
kuneziqhingi eziyisithupha ezihlala abantu kanti ezine zinesikhumulo sezindiza, kodwa eyasendaweni, ukuze ukwazi ukufika lapho ngendiza noma ngesikebhe. Uma ukhetha indiza usuka eTahiti ngezindiza zansuku zonke eziya eNuku Hiva naseHiva Oa. Ukuze uye kwezinye iziqhingi, kufanele udlule kwesinye salezi ezimbili. Uma, ngakolunye uhlangothi, ukhetha ukuhamba ngesikebhe, iqiniso ukuthi noma ngubani odabula iPolynesia akuthatha, kufanele ufune izinketho, isibonelo iTahiti Voile et Lagoon noma iPoe Charter noma iAranui 5 cruises cruises, ezihamba ngomkhumbi kanye ngosuku.nyanga kepha zingamakhulu amathathu ama-euro ngesonto. Uma unesikebhe sakho ungasuka eGalapagos noma eCook Islands.
ukuhamba phakathi kweMarquesas Islands ungandiza, phakathi kweziqhingi ezimbili ezinkulu kunezindiza eziphakathi koyedwa noma ezimbili ngosuku. Iziqhingi zase-Ua Pou nase-Ua Huka azinayo inhlanhla ngezindiza zansuku zonke. Umqondo omuhle ukuthenga i- IMarquesas Pass neTahiti Air. Ungahamba ngesikebhe, qasha indawo, qasha isikebhe sakho. Kunesikebhe esihlanganyelwa ngaphakathi kweMarquesas del Sur, esiya esiqhingini saseTahuata naseFatu Hiva (cishe ama-euro angama-65 ukuya nokubuya kohambo lwamahora amahlanu).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Iziqhingi zaseMarquesas, ipharadesi
Yini ongayibona eSarlúcar de Barrameda